09/02/2018 - Page 3 sur 4 -
Menabe : Niamboho ny Mpanjakavavy Georgette Kamamy
Foko iray mbola mitana sy mandala ny fomba nentin-drazana ny foko Sakalava, ary mbola manaja ny fifampitondrana ara-drazana. Mbola manana ny lanjany goavana eo amin’ny fiaraha-monina ny fitondrana indrindra amin’ireo hetsika samihafa ataon’izy ireo. Niamboho …Tohiny
Banky : Afaka mindram-bola ihany koa ireo efa misotro ronono
Mahakasika ny salan-taona rehetra ny filàna vola. Ny fahatsapana izany no mahatonga ireo banky samihafa manome tolotra isan-karazany. Nanomboka tamin’ny taona lasa, efa azon’ireo mpiasam-panjakana misotro ronono atao ihany koa ny mindram-bola eny amin’ny banky, …Tohiny
Hanatosaka vazo miteny ho an’ny mpankafy eto an-toerana i Samoëla Mialoha ny hiampitany ranomasina mandritra ny volana vitsivitsy. Hanatosaka vazo miteny ho an’ireo mpankafy eto an-toerana i Samoëla ary manome fotoana ireo mpankafy azy etsy …Tohiny
Ny 60 isan-jaton’ny mpianatra eny anivon’ny anjerimanontolo eny Ankatso no mitsoaka andaharana alohan’ny hidiran’ny amin’ny taona faharoa. Ao anatin’izay ihany, maro be ireo mpianatra no tsy mifanaraka amin’ny asa hiriany any aorianan’ny fianarana noratoviny ny …Tohiny